Ukunganyangekiyo kwendabuko yemilenze ye-varicose
Kwinqaku lethu "Unyango lwemveli lwama-varicose veins" uya kufunda malunga neendlela zokulwa nemilenze ye-varicose.
Njengezinye izifo ezininzi, iintsholongwane ze-varicose zidinga unyango olungelona lwendalo. Ukuchasene nokusetyenziswa kwangaphakathi kweziyobisi ezisetyenziselwa ngaphandle-ioli, izicelo, ukuxubha, iinkqubo ezahlukeneyo, njl. Iinkqubo nge-kvass kwi-bread rye.
Thatha iingu-1-2 izonka zezonka ezimnyama (ezibizwa ngokuba yi-rye), uthathe amathanga amancinci, ufefe ngamanzi, wandise kwi-polyethylene uze ubeke endaweni emnyama. Ngeveki okanye ezimbini, iinqununu zesonka ziya kugutyungwa nge-blue-dark mold (le penicillin). Ukubumba ngakumbi, kungcono. Konke oku kufakwe kwipuphu enkulu yoqweqwe loqweqwe lwawo, uthele ngokufudumele (kungekhona kushushu!) Amanzi 1-1.5 amabhakethi. Gubungela ngesiqhekeza, gubungela phezulu ngendwangu, gubungela ngeengubo. Kwiintsuku ezimbalwa emva koko, xa isiqhekeza sivulwe ngephunga eliqingqiweyo elivela kwisithambiso, ungaqhubeka kwinkqubo. Ukunyamezela nge-colander, cima ngokubanzi kwaye uhluke. Umbane akufanele kubanda okanye kushushu. Ukufudumala ukuya kuma-37 degrees. Nciphisa imilenze yakhe kwinqanaba lamadolo. Ngaphezulu kweemilenze zibeka umcimbi (ukufudumala). Yaye ke yonke imihla ngemizuzu engama-30-40 kwinyanga enye inkunkuma efanayo. Inkqubo ivame ukuqhutyelwa kusihlwa, ngeli xesha ungafunda, jonga iTV, njl.
Inkonzo ebalulekileyo kwimilenze ye-varicose ingabumba. Umhlophe, obomvu, ophuzi ...
Ilayini kufuneka imiswe elangeni okanye kufuphi naluphi na umthombo wokushisa. Gaya ukuze ufeze, uhlambe, uhlambuluke kwiintlobo kunye nezinto zangaphandle. Hlanganisa i-powder kwi-bark encinci ye-chestnut kunye ne-oak bark engxenyeni elinganayo. 1 tbsp. xuba i-spoon nge-5 tbsp. Iipuni zobumba kunye nomncinci wamanzi ukuhambelana nokucoca ukomncu. Gubungela iinyawo zakho ngonqwelwe obuncitshisiweyo, ulungele ngophethi wembethe kwaye unxibe ithawula. Yenza ngo busuku. I-hazel (hazel) yi-corylus avellana. Ngubani ongazange ahambe iinqununu? Ziyakhula ezihlahleni eziphakamileyo, ngamanye amaxesha zifikelela ukuphakama kwemitha engama-7. Isityalo sihlala emahlathini anqabileyo. Ngeenjongo zokwelapha, amaqabunga avunwa ngoMeyi, i-bark - nangaliphi na ixesha lonyaka, elomileyo.
Amaqabunga kunye namaqabunga aneoli efunekayo, i-tannins, i-alcohols, i-glycosides. Ioli efunekayo yi-vasodilator. 2 tbsp. Iipuni zamagqabi athululela iikomityi ezimbini zamanzi abilayo, unyanzele ukude upholise kwaye uphuze njengesiqingatha seglasi 4 amaxesha ngosuku ngaphambi kokutya. Umzimba awuqhelekanga kulolu hlobo unyango, unokunye okunye kunye nokuqokelela okulandelayo:
I-bark ye-hazel-3 izingxenye, i-bark encinci ye-walnuts ne-bark ye-oki-kwiindawo ezi-1. 1 tbsp. Iqoqo le-spoon lithelelwa ku-1.5 iikomityi zamanzi abilayo kunye nokuhlambela amanzi kwindawo yokutywinwa ebilisiwe yimizuzu eyi-10. Musa ukuxina, uphuze kwiindawo ezilinganayo ngelilanga kunye nemivilini ye-varicose.
Ukutya kule mihla izitya zamatkin, i-zucchini, isitshalo seqanda, i-salads kwiklabishi entsha, njengoko ukuhlanganiswa kuqinisa. Ukujonga imeko yesisu.
Akukho mpe mbelelo embi kwonyango lokugcoba i-hazel:
Amafutha eengulube, kwaye ngakumbi, amafutha amancibilikisayo avela kumathambo enyama yenyama yegazi yinyama ixutywe kunye nomgubo we-hazel e-hazel ngokulinganayo nomthamo: 1 inxalenye yepowder ukuya kwiindawo ezintathu zeoli. Igcinwe kwindawo yokuhlambela ngamanzi kwisitya esivaliwe kwisigamu seyure, sichazwa ngokutshisa, kushushu. Faka isicelo sokugqoka i-thrombophlebitis, i-varicose veins, kunye nezilonda. Njengoko zome, ziyakushintsha.
Ukuze ugweme imivimbo ye-varicose, gcina imithetho ephambili: ukuba unomsebenzi ohlala phantsi - zama ubuncinane amaxesha amaninzi ukuba uvuke uze uhambe kwikorori, kunye nomsebenzi wokuma-ukuhlala phantsi. Kwaye kubaluleke kakhulu - yenza umlinganiselo wezambatho zakho kumgangatho ophantsi, kwaye ukuba usadingeka ubeke izithende - ungahambi kuzo iiyure ezingama-3 ngosuku. Oku kuya kukhusela imilenze yakho kwimivilini ye-varicose insidious.
Ulwandle ityuwa, iinzuzo kunye nokusetyenziswa
Yintoni eyenza ukuphuma kwamanzi, ukuphathwa njani kwiyeza elenziwe ngabantu?
Izakhiwo ezisetyenziswayo zobusika baseLinden
Indlela yokuhlawula ubuchopho ngamandla
Unyango lwe-cystitis eqaqambileyo kunye namachiza omntu
Umtshato kaNyusha: iinkcukacha zokuziphatha, iifoto kunye nevidiyo
Yintoni eyenza i-speleocamera?
Ukuzivocavoca umzimba ukulahlekelwa ubunzima obunzima obukhulu
Ukunyameka ngexesha lokukhulelwa
Iindlela zokuthintela ukukhula kweenwele
Sisiphi isipho esihle kakhulu somtshato?
Ungasusa njani iipilisi kwiipuphu
Izindlela zokufumanisa imeko yomntwana
Ukukhulelwa kwe-Ectopic: iimpawu kunye neempawu
IJam eyenziwe nge-buckthorn yolwandle
U-Yana Rudkovskaya wayehlekisiwe ngenxa yokubonisa-off and off-off, ifoto
Gymnastics of muscle muscle
Izilwanyana zonyango zonyango